News Collection: सेक्स खोज्नेमा नेपाल विश्वकै १० नम्बर
सेक्स ? हे यो विषयमा कुरै नगरौं, अधिकाशंले दिने रेडिमेड उत्तर हो यो। सेक्सका बारेमा कसैले कुरा गरिहाले पनि कुरा गर्ने व्यक्तिहरू आलोचनाको पात्र बन्ने निश्चित छ। हाम्रो समाज सेक्स वा यससँग सम्बन्धित विषयमा कति ढोंगी छ भन्ने कुरा यो विषयमा कुरा गर्नु पनि अपराध मान्ने मनोवृत्तिले प्रस्ट पार्छ।
विश्वास गर्न गाह्रो पर्ला, इन्टरनेट युजरहरूको गुगल सर्चका आधारमा सेक्ससम्बन्धी सामग्री खोजी गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा विश्व मै नेपाल दसौं स्थानमा छ। यो सन् २०११ मा गुगलमा नेपालीहरूले सेक्सका बारेमा गरेको खोजीको आधारमा तय भएको स्थान हो। श्रीलंका, भारत, पपुवा न्युगिनी, इथियोपिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, सोमालियापछि नेपालले उक्त स्थान बनाएको हो। गुगलका अनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ६४ प्रतिशत नेपालीले सेक्स रिलेटेड कन्टेन्ट (सामग्री) सर्च गरेका थिए। सेक्स रिलेटेड कन्टेन्ट खोज्ने क्रममा सन् २००९ र सन् २०१० मा नेपाल विश्वभरमै सातौं स्थानमा रहेको गुगलले देखाउँछ।
अब कुरा गरौं काठमाडौंको जीवनशैलीको, अहिलेको काठमाडौं वास्तवमै यौनसम्बन्धी छुट्टै मानक खडा गरेर बसेको सहर हो। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वका हिसाबले विशेष महत्व राख्ने यो सहरको आफ्नै इतिहास छ। यो सहरमा सेक्स अर्थात् यौनका विषयमा खुला रूपमा कुरा गर्न बर्जित छ, तर रति क्रियामा लिप्त रहेको देखाउने टुँडाललाई प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्छ। सेक्सका बारेमा देखिएको दोहोरो चरित्र कतिसम्म छ भन्ने कुरा मानिसहरूको व्यक्तिगत जीवनशैली हेरे अझ प्रस्ट हुन्छ।
सहरका पुरुषहरू बिहान घरबाट निस्कँदा इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान बोकेर काममा जान्छन्। घरमा बस्ने हुन् वा कामकाजी नै, महिलाहरू आफ्ना छोरीलाई सधैं भर्जिनिटीको महत्व सम्झाइरहेका हुन्छन्। महिलाको इज्जत नै कौमार्य भएकाले यो गुमे सर्वस्व गुम्ने पाठ सिकाउनु आमाको दायित्व नै मानिन्छ। छोराहरू एकदमै आज्ञाकारी छोराको चरित्रमा अभिनय गरिरहेका हुन्छन् भने छोरीहरू ज्ञानी तथा शिल स्वभावयुक्त नारीको छवि निर्माणको प्रयासमा हुन्छन्। पति-पत्नीव्रता र पत्नी-पतिव्रता भएर एक अर्कामा समर्पित छौं भन्ने देखाउन चाहन्छन्। प्रत्येक दम्पती यही सोच्न चाहन्छन् कि- उनीहरूको छोरोले सेक्सका बारेमा कुनै सोच नै राख्दैन्, त्यस्तै छोरी आफ्नो भर्जिनिटी अर्थात् कुमारित्वको खुबै ख्याल गर्छे र त्यसलाई आफ्नो सम्पत्ति मान्छे।
कला संस्कृतिको धुरन्धर ऐतिहासिक प्रमाण बोकेर पनि यौन अर्थात सेक्सका बारेमा नेपाली समाज आवरणमा मौन छ। यसलाई विकृत मान्नेहरू र कुराकानीको विषय नै बनाउन नचाहनेहरूलाई पनि सेक्सको महत्व भने राम्रैसँग थाहा छ। त्यसैले हुनसक्छ, यौन रसको आनन्दनुभूतिमा जो कोही उत्तिकै लालायित छन्। सेक्स अट्रयाक्सनको मोहजालमा परिसकेपछि त्यसको सन्तुष्टि प्राप्तिका लागि मानिस छटपटिन्छ। त्यही छटपटीले एकान्तको खोजी गर्छ, अनि गुगलमा फेरी टाइप हुन्छ एस इ एक्स।
अहिलेको समयमा छोरी देश वा विदेशको कुनै सहरमा काम गरिरहेकी हुन्छिन्। ठूलो सहरमा आफ्नी छोरी एक्लै बसेर काम गरिरहेकि छे भनेर बाबु आमा दंग छन्, तर यहीबीचमा परिवारको इज्जतको ख्याल गर्नु भनेर आमा फोन गरेर पटक-पटक छोरीलाई सम्झाइरहेकि हुन्छिन्। शिलस्वभाव युक्त भनिएकी छोरी हुन्छ-हुन्छ भनेर फोन राख्छे, फोन राखिनसक्दै उ ढकढकिएको ढोका खोल्न जान्छे, ढोका बाहिर उसको व्वाइफ्रेन्ड हुन्छ। छोरीलाई त्यति बेला गुगलमा सेक्स सर्च गर्ने आवश्यकता नै पर्दैन्, किनभने उ आफ्नै ब्वाइफ्रेन्डसँग रियल सेक्सको मज्जामा हुन्छे।
आज धेरै युवतीहरू आत्मनिर्भर जीवनयापन गरिरहेका छन्। उनीहरू एक्लै बस्छन्, यस्ता युवतीहरूका आमाबुबा के सोच्छन होला ? बाबुआमा वास्तवमा छोरी कुनै पनि अवस्थामा यौनमा लिप्त छैन भन्ने सोच्छन्। उनीहरू यस्तो सोच्छन् किनभनें उनीहरू वास्तवमै त्यति मात्र सोच्न बाध्य छन्। आफ्ना सन्तानका प्रतिविश्वासभाव राखेर यसप्रकारको भलो सोचाइ राख्न उनीहरू बाध्य छन्।
रिसर्च भन्छ-'वास्तवमा जहाँ जति कडा बन्देज छ, जहाँ नैतिकताको उच्च पाठ पढाइन्छ र जहाँ मुखबाट धारा प्रवाह प्रवचन बर्सिन्छ त्यहाँको समाजमा सेक्सको उत्तिकै गहिरो भोक छ। भित्रि हृदयमा सेक्सको चाहना प्रबल हुन्छ। हजारौं चाहना उत्पिडनको शिकार भएका छन्, इच्छा र चाहना तीव्र भए पनि भन्ने साहस कसैमा छैन्, समाधान एउटै छ, इन्टरनेट।
आखिर यौन किन यति गहिरो विषय भएको हो ? आवरण र भित्री यथार्थमा किन यति धेरै अन्तरविरोध ? सबै जना भन्छन एउटा अनि गर्छन अर्को कुरा किन ? सबैका सामु एउटा कुरा तर एकान्त वा एक्लो स्थानमा अर्को गतिविधि किन ? भारतिय सेक्स मनोविज्ञाता डा. सुधीर कक्कड भन्छन्- 'हाम्रो समस्या भनेको दोहोरो चरित्र निर्वाहका कारण सिर्जना भएको हो, यही समाजमा एकातर्फ कामसुत्र तथा टुँडाललाई पूर्वीय दर्शनको गहना मानिन्छ भनें अर्कातर्फ मनुस्मृतिलाई संस्कार मानिन्छ। मनुस्मृति भन्छ, 'रजस्वाला भएकि कन्याको अनुहार हेर्ने पिता र भाइ नर्कमा जान्छन्।' त्यसको अर्थ के हो ? युवती जवान हुनु अगावै अथवा उनको शरीरले इच्छा र चाहना खोज्नु अगावै उनलाई रक्षकको जिम्मा लगाइदिनुपर्छ ?'
ग्लोबलाईजेसनले निर्माण गरेको नयाँ विश्वमा पुरानो सामन्ती सोचको विकल्पमा यो आधुनिक संस्कृतिले धावा बोलिसकेको छ। सामन्ती सोच सेक्सको मामिलामा यति ढोंगी छ कि शाश्त्रमा यौनका बारेमा उल्लेखित कुराहरू जानेर पनि यस विषयमा खुला हुन चाहँदैन अनि एकान्तबासमा त्यसमै रमाउँछ। आफूभन्दा पछिल्ला सन्तती पनि यही संस्कारबाट चलून् भन्ने चाहना सामन्ती संस्कारको छ तर नयाँ पुस्ता यो आधुनिक संस्कृतिलाई खुला रूपमा अंगीकार गर्ने साहस जुटाउने प्रयासमा छ।
'मेरो नजरमा वाल विवाह अपराध हो, तर यसको एउटा उज्यालो पक्ष पनि छ। बालविवाहले मानिसको व्यक्तिगत चरित्रमा केही अंकुश लगाउन सक्न्थ्यो। ढिलो विवाह हुँदा शारिरिक चाहनाले पनि चरित्रलाई असर पुर्‍याइहाल्छ अनि अवश्य पनि उसको कौमार्य गुमिसकेको हुन्छ।' समाजशाश्त्री अनुप क्षेत्री भन्छन्- 'तर के कौमार्य यति महत्वपूर्ण बस्तु हो ? जसको यति धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। पूर्विय दर्शनले जीवन गुमाएर भएपनि कौमार्यको रक्षा गर भनेको छ तर बुझाइका आधारमा भनें नैतिकता वा कौमार्यको कुरा यहाँ महिलामा मात्र लागू छ। के पुरुषको कौमार्यको कुरा कतै उठेको छ ?'
क्षेत्री भन्छन्- 'आखिर कौमार्य के हो ? अनि किन यसलाई बचाउनु आवश्यक हुन्छ ? ३० वर्षसम्म आफ्नो करिअरका लागि विवाह नगर्ने युवाहरूको हकमा भर्जिनिटी रहनुपर्छ भनेर तर्क राख्नु कति न्यायसंगत छ ? वास्तवमै यो ठूलो अन्याय हो।' हार्मोनको वृद्धिका कारण जुन उमेरमा मानिसले विपरीत लिंगीप्रति आकषिर्त हुन थालेको महसुस गर्न थाल्छ अथवा शरीरले जब कामबासना प्रवेश भएको अनुभूति गर्छ, त्यो उमेर कुनै पनि अवस्थामा विवाह योग्य नहुने भएपछि कौमार्यको पृष्ठपोषण गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएको क्षेत्रीले बताए।
नाम नबताउने सर्तमा नर्सिङ पेसामा कार्यरत एक युवती भन्छिन्- 'व्वाइफ्रेन्डसँग मेरो नियमित सेक्सुअल रिलेसन् छ। यो कुरा मेरो एकदमै नजिकका साथीहरूलाई पनि थाहा छैन्।' रुढिबादी र परम्परागत परिवारकी ती युवतीलाई थाहा छ, समाज र परिवार यो कुरालाई एकदमै गलत मान्छ तर उनी दुई देहले मागेको अवस्थामा सेक्सुअल रिलेसन राख्नुलाई पटक्कै गलत मान्दिनन्। उनका अनुसार स्वस्थ जीवनका लागि प्राकृतिक यौनसम्बन्धले ऊर्जा दिन्छ।
साइको एनालिष्टहरू भन्छन्- यो आधुनिक संस्कृति वास्तवमै सामान्य मनोविज्ञान हो, जुन कुरालाई बढि दबाउने प्रयास गरिन्छ, त्यसैले धेरै शिर उठाउने प्रयास गर्छ । मुख्य समस्या हाम्रो दोहोरो चरित्रमै छ। मनोवैज्ञानिक रिसर्चका अनुसार पूर्विय समाजमा विवाहभन्दा पहिले सेक्सलाई गलत र निन्दनीय भनेर बुझ्ने मात्र होइन्, दुई स्वस्थ शरीरको शारिरिक सम्बन्धको संभावनाका बारेमा सोच राख्नु पनि अपराध हो भनेर बुझाइएको छ, जुन एकदमै गलत छ। त्यतिमात्र होइन, यहाँ सेक्सको विषयमा पति र पत्निबीच खुला रुपमा संवाद समेत गरिदैन्। यस्तोमा इच्छा र चाहनाले चोरबाटो खोज्न थाल्छ। पोर्नसाइट, अश्लिल एसएमएस, सेक्स टोय र जोखिमपूर्ण सम्बन्ध अहिले यौनकै दोस्रो ढोका बनेका छन्।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा सयौं युवायुवती विवाह पूर्वको देहसम्बन्ध स्वीकार गर्न तयार छन्। पढेलेखेका, आत्मनिर्भर तथा आफ्नो पहिचान निर्माण गरिसकेका ३० नाघेकाहरू बकाइदा 'फ्रि-सेक्स' को वकालत गर्छन्। उनीहरूका अनुसार जीवनका अन्य अनुभवहरू झैं सेक्स पनि एउटा अनुभव हो। यो वास्तवमा जीवनकै जरुरी र अन्तरंग हिस्सा हो। त्यसो भए, अब मुख्य कुरा, यसमा नैतिकता र अनैतिकताको कुरा कहाँबाट आउँछ ? एक चर्चित महिला पत्रकारका अनुसार हामी नैतिकता र सेक्सुअल पवित्रताका बारेमा घनघोर वहस गर्छौ तर किशोरीहरूमा बढिरहेको गर्भपतनका बारेमा भनें ख्याल गर्दैनौं। कन्डम र गर्भनिरोध औषधीको बजार किन यसरी एक्कासी बढिरहेको छ कहिल्यै जान्न खोजिएको छ ?